Buy House Rent (ID-1170) in Bahan on ipivi.com
House Rent (ID-1170)
2 Stories house rent in Golden Valley , Bahan Township. House area - 900 sqft. House has Living-room, One Master Bed-room, One Single Bed-room, Kitchen and Bath-rooms. Monthly rent price of house is - 10 Lks (Nego)
ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေတောင်ကြားလမ်းရှိ ငှားရန် နှစ်ထပ်လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်အကျယ် - ၉၀၀ စတုရန်းပေရှိပါသည်။ လုံးချင်းအိမ်အတွင်း ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် တစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ် တစ်ခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများ ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ လုံးချင်းအိမ်၏ လစဉ်ငှားရမ်းခမှာ - ၁၀ သိန်း (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် (ID-1170)
Name: House Rent (ID-1170)